အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Dhawell.hlugalay - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Dhawell.hlugalay ![ပြင်ဆင်ရန်]
--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၁၅:၃၇၊ ၂၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မြန်မာလို ဘာသာပြန်လို့ ရနေတဲ့ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်တွေကို များသောအားဖြင့် ကျနော်သိရသလောက် အင်္ဂလိပ်လို Redirect ပြန်ညွှန်းလေ့မရှိပါ။ မြန်မာလို အမည်ခေါ်ရခက်တဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးကိုသာ မူရင်းအင်္ဂလိပ်စာလုံးအတိုင်း သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ YouTube လိုမျိုးဆိုရင် မြန်မာလို ယူကျူးဘ် လိုရေးပြီး အင်္ဂလိပ်လို YouTube ဆိုပြီး ပြန်ညွှန်းတာမျိုးပေါ့။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၉:၂၀၊ ၂၅ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Thanks for the info, Dr Lotus. When I've searched back my redirects, I guess "Frost" and "Human history" are the possible candidates against this mywiki custom. Let me try to explainalittle bit about these two redirects. Let's start with "Frost".
အဓိက အကြောင်းရင်းခံကတော့ ဒီ concept က ကျနော်တို့ မြန်မာတွေနဲ့ (အထူးသဖြင့် မအေးတဲ့ဒေသမှာနေတဲ့ ကျနော်လို အောက်ပိုင်းသားတွေလိုမျိုး) သိပ်ပြီး မရင်းနှီးတဲ့ concept ဖြစ်နေတာက တစ်ကြောင်း၊ ပြီး Frost နဲ့ နှင်းခဲဆိုတဲ့ စာလုံးကို မတွဲမိတာက တစ်ကြောင်း ပြန်ပြီး redirect လုပ်ထားတာပါ။ ဒီနှင်းခဲဆိုတဲ့ translation ကိုတော့ နောက်ထပ်တစ်ချက်က myordbok ကယူထားတာပါ။ ဒီ သိပ္ပံ concept ကို ကျနော်စဉ်းစားတိုင်း စိတ်ထဲမှာ Frost ဆိုတဲ့စာလုံးနဲ့ပဲ ပေါ်ပေါ်လာတာကလည်း တစ်ကြောင်းပေါ့ဗျာ။ ဇာတ်ကြောင်းပြန်ရရင်တော့ "Human history"ကို ဘာသာပြန်နေတုန်းမှာ "frost-free zones of Europe"ဆိုတဲ့ phrase ကို ဘာသာပြန်ဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့ ဒီ concept ကို ဖတ်မိပြီး ဘာသာပြန်ထည့်မိသွားတာပါ။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ရှာဖွေရလွယ်အောင် pageviews များအောင် coverage netကို redirectတွေသုံးပြီး ချဲ့ထားတာလဲ တစ်ကြောင်းပါ။
နောက်တစ်ချက်က အခုမှ မြန်မာစာအဖွဲ့က ထုတ်ထားတဲ့ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်မှာ ပြောင်းပြန် နှင်းခဲကို ပြန်ကြည့်တော့ snowလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထားတာတွေ့တယ်။ ဒီတော့ ကျနော့်ရဲ့ "နှင်းခဲ" ဘာသာပြန်မှုဟာလဲ တကယ်တော့ သိပ်ခြုံငုံမိတဲ့ ဘာသာပြန်မှု မဟုတ်သေးတော့ ပိုသင့်တော်တဲ့ စကားလုံးရှိရင်တော့ နံမည်ပြောင်းသင့်ပါတယ်။ ဒီလို ခြုံငုံမိတဲ့ အမည်ပြောင်းပြီးရင်တော့ "Frost" redirect ကို ဖြုတ်လို့ရပါတယ်။
"Human history" redirect ကတော့ "ကမ္ဘာ့သမိုင်း"လို့ "History of the World"ကို ဘာသာပြန်ပြီးမှ မူလ enwiki ဆောင်းပါးက ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က ကျောင်းမှာသင်တဲ့ ကမ္ဘာ့သမိုင်းစာအုပ်နဲ့ focus မတူပဲ ရှင်းပြနေတာတွေကို ဘာသာပြန်ရင်းတွေ့လို့ ဒီ redirect ကိုထည့်ထားတာပါ။ ဒီ "redirect"ကတော့ ဒီလောက် အရေးမကြီးပါဘူး၊ ဖြုတ်ပြစ်လိုက်လို့ရပါတယ်။
Dhawell.hlugalay (ဆွေးနွေး) ၀၃:၂၉၊ ၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Dhawell.hlugalay&oldid=526399" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၀၃:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။